Ngaphezu kwesiqingatha sababhalisi boMculo weApple basebenzisa iaudio yendawo | Iindaba ze-iPhone
Ngaphezu kwesiqingatha sababhalisi boMculo weApple basebenzisa iaudio yendawo
Umculo yinxalenye yobomi bethu kwaye iApple iyazi ukuba yindawo elungileyo yokutyala imali, ukwenza izinto ezintsha kunye nokwenza. Ukusungula eyakho inkonzo yokusasaza umculo Yayisisiqalo nje sokufikelela kwihlabathi lomculo. Emva koko kwafika ii-AirPods ngazo zonke iindlela kwaye kwakamsinya emva koko kwafika ukudityaniswa komsindo wendawo kunye nomsindo ongalahlekiyo ukuba iApple idityaniswe kuzo zonke iinkonzo zayo. USilver Schusser, usekela mongameli weApple Music kunye neBeats, uye waqinisekisa kudliwanondlebe ukuba ngaphezu kwesiqingatha sabaphulaphuli boMculo we-Apple kunye nababhalisi basebenzisa i-spatial audio feature.
Isiqingatha sabaphulaphuli boMculo weApple basebenzisa iaudio yendawo
I-Spatial audio yitekhnoloji ye isandi esingqonge evumela umsebenzisi ukuba azive amava antywilayo kumxholo wemultimedia. Hayi kuphela iimuvi kunye nochungechunge kodwa umculo unokuviwa ngale audio yendawo okoko irekhodiwe okanye ilungiselelwe le fomathi. Irediyo yendawo yabetha ikhathalogu yoMculo ka-Apple ngoJuni ka-2021 kwaye ukusukela ngoko Iingoma ezingaphezulu kwezigidi ezingama-70 zixhaswa licandelo.
En udliwanondlebe usekela-mongameli we-Apple Music kunye neeBeats, uSilver Schusser, uqinisekise oko ngaphezu kwesiqingatha sababhalisi be-Apple Music sebenzisa iaudio yendawo:
Ngoku singaphezulu kwesiqingatha sababhalisi bethu behlabathi behlabathi be-Apple Music abamamele kwiaudio yendawo, kwaye elo nani likhula kakhulu, ngokukhawuleza okukhulu. Sinqwenela ukuba amanani ebephezulu, kodwa ngokuqinisekileyo angaphezulu kobesikulindele.
Okufanayo akwenzeki nge Iaudio engenakulahlekelwa okanye engalahlekiyo. Eli lelinye inqaku elifumaneka kwiApple Music. Ibandakanya i ukunyanzeliswa komsindo okungalahlekiyo okanye i-Apple Lossless Audio Codec (ALAC). Ikhowudi yokufikelela kwizigqibo ukusuka kwi-16-bit/44,1 kHz (umgangatho weCD) ukuya kwi-24-bit/192 kHz.
I-HomePod sele ixhasa iDolby Atmos kunye ne-Apple Lossless, yile ndlela eyenziwa ngayo
Ingxaki nge Loseless kukuba ayiluxhasi uqhagamshelwano ngeBluetooth. Oko kukuthi, ukunyanzeliswa okuphezulu kunye nomgangatho ophezulu wesandi awunakufezekiswa ngee-AirPods okanye iiBeats kwaye kuyimfuneko. uqhagamshelo olunentambo kwii-headphone, abamkeli, izithethi, okanye izithethi ezakhelwe ngaphakathi zesixhobo. Yingakho izinga lokusetyenziswa kwe-LosseLess aliphezulu kakhulu, ngakumbi ngenxa yokunyuka kokusetyenziswa kwezithethi zeBluetooth, kuquka i-AirPods, kuluntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Ngaphezu kwesiqingatha sababhalisi boMculo weApple basebenzisa iaudio yendawo
Ususa njani isandi kwividiyo kwi-iPhone
Ngoku unokubukela ifilimu emfutshane yomlawuli uPark Chan-wook efotwe kwi-iPhone 13 Pro